Unglọ ọrụ na-egbu egbu, ndị na - eweta ya - China Fungicide Manufacturers
Ngosipụta ngwaahịa nkọwa aha nkịtị Azoxystrobin （71751-41-2） Aha ọzọ AZX, Amistar, Quadris Molecular formula C22H17N3O5 3dị Formdị Azoxystrobin Teknụzụ: 97% TC, Azoxystrobin Formulations: 25% SC, 50% WDG, 80% WDG Mode of Action The ọnọdụ nke ime ihe bụ site na mgbochi mitochondrial respiration na fungi.It egbochi spore germination, mycelial ibu, na spore mmepụta nke fungicide. Nchịkọta Ngwa Ọgwụ Ọrịa Ọgwụ ...
ihe na-egbu egbu Benomyl 50% WP CAS 17804-35-2
Ngosipụta ngwaahịa nkọwapụta Aha ngwaahịa Benomyl General Ozi Ọrụ: Nkọwapụta Fungicide: 50% WP CAS: 17804-35-2 High agrochemical Toxicology Oral Acute oral LD50 for rats> 5000 mg ai / kg. Akpụkpọ anụ na anya Nnukwu LD50 dịpụrụ adịpụ maka oke bekee> 5000 mg / kg; negligible irritant ka anụ, nwa oge na anya (rabbits). Inhalation LC50 (4 h) maka oke> ikuku 2 mg / l. NOEL (2 y) maka oke> 2500 mg / kg diet (ọnụego kachasị anwale), enweghị evidenc ...
Ngosipụta ngwaahịa Nkọwa ngwaahịa Aha Carbendazim Function Fungicide Specification 98% Tech, 500g / L SC Chemical Name methyl 1H-benzimidazol-2-ylcarbamate CAS No. 10605-21-7 Empirical Formula C9H9N3O2 Toxicology Oral Acute oral LD50 maka oke 6400, nkịta> 2500 mg / n'arọ. Akpụkpọ anụ na anya Nnukwu LD50 dịpụrụ adịpụ maka oke bekee> 10 000, oke> 2000 mg / kg. Na-enweghị mgbakasị ahụ na anya (rabbits). Ọ bụghị akpụkpọ anụ (Guinea pigs). Inhalat ...
fungicide Ọla kọpa hydroxide 77% WP
Ngosipụta ngwaahịa nkọwapụta Aha aha Ọla kọpa hydroxide Ọrụ Fungicide Nkọwapụta 97% TC, 77% WP, 50% WP Chemical Aha ọla kọpa hydroxide (Cu (OH) 2) CAS Nke 20427-59-2 Empirical Formula CuH2O2 Toxicology Oral Acute oral LD50 maka oke 489 mg / kg (tech.). Akpụkpọ anụ na anya Nnukwu LD50 dịpụrụ adịpụ maka oke bekee> 3160 mg / kg. Nnukwu iwe na-emebi emebi na anya, akpụkpọ anụ dị nro. Inhalation LC50> 2 mg / l ikuku. Klas nsị WHO (ai) III; EPA (Nwa) ...
fungicide Ọla kọpa oxychloride 50% WP CAS 1332-40-7
Ngosipụta ngwaahịa nkọwapụta Aha ngwaahịa Ọla kọpa oxychloride General Ozi Ọrụ: Nkọwapụta Fungicide: 50% WP CAS: 1332-40-7 Ọfụma agrochemical Toxicology Nnukwu LD50 ọnụ maka oke bụ 700 mg / kg. Nnukwu LD50 na-egbu egbu karịrị 2000 mg / kg. Ngwa Ngwa Inorganic irè na-echebe fungicide, ọrụ site atọhapụ ọla kọpa ion ka denature protein na anzyme na fungal spores. Njikwa oge ngwụsị nke poteto, tomato ...
Ngosipụta ngwaahịa nkọwapụta Aha aha Cymoxanil Function Fungicide Specification 50% WDG Chemical Name 2-cyano-N - [(ethylamino) carbonyl] -2- (methoxyimino) acetamide CAS Nke 57966-95-7 Empirical Formula C7H10N4O3 Toxicology Oral Acute oral LD50 maka oke nwoke 760, ụmụ nwanyị oke 1200 mg / kg. Akpụkpọ anụ na anya Nnukwu LD50 dịpụrụ adịpụ maka oke bekee> 2000 mg / kg. Ọ bụghị anya mgbakasị; obere akpụkpọ ahụ mgbakasị (rabbits). Ọ bụghị akpụkpọ anụ (Guinea pigs). ...
Framicide Thiram 98% TC, 50% WP, 70% WP, 80% WDG
Ngosipụta ngwaahịa nkọwa Ngwaahịa Aha Thiram 80% WP CAS Nke 137-26-8 Nkọwapụta (COA) Ọdịnaya: ≥50% kwụsịtụrụ ọnụego% r: ≥75 Wetting time s: ≤120 MF C6H12N2S4 Mode of Action Ọ bụ obere nsi fungicide, akpụkpọ ahụ na mucous membranes nwere mmetụta na-akpali akpali. Ebumnuche Thiram ejiri mee ihe dị ka ọgwụgwọ mkpụrụ iji chịkwaa smut na bunt nke ọka, na-ekpuchi ma na-ekpuchi smut na Typhula bley nke ọka bali, powdery mildew, rusts, akwukwo akwukwo ma buru ihe nile na mgbọrọgwụ na ...
Mgbu Triazolone 95% TC, 25% WP
Ngosipụta ngwaahịa nkọwa Njirimara Triadimefon bụ triazole fungicide na arụmọrụ dị elu, nsị na-egbu egbu, obere ihe fọdụrụ, ogologo oge na ihe onwunwe siri ike Mgbe etinye obi gị dum site n'akụkụ dị iche iche nke osisi, ọ nwere ike na-eduzi na osisi ahụ. Ọ dị irè na igbochi, iwepu, na ịgwọ nchara na powdery mildew. Ọ dị irè maka ọrịa dị iche iche dị iche iche dị ka ọka roundspot, ọka moire, akwụkwọ nri ọka wheat, painiapulu ojii ire ere, isi ọka smut, wdg.
Ziram na-egbu egbu 95% TC, 80% WP CAS 137-30-4
Ngosipụta ngosipụta ngwaahịa KWES NAMER NAME AH NAME ziram CAS NO. 137-30-4 CATEGORY fungicide MGBE 95% TC, 80% WP Mkpokọta 25kg / drum ma ọ bụ dị ka gị chọrọ Ngwa Ziram bụ ugbo dithiocarbamate fungicide eji na a dịgasị iche iche nke osisi fungi na ọrịa. Enwere ike itinye ya na ahịhịa nke ahịhịa, mana ejiri ya dịka ala na / ma ọ bụ ịgha mkpụrụ. APATARANCE ọcha ntụ ntụ Esi ebe agbaze poin ...
Ngosipụta nkọwapụta ngwaahịa Tricyclazole bụ fungicide pụrụ iche maka ijikwa bọmbụ osikapa, nke thiazoles. Usoro nke bactericidal edinam bụ tumadi na-egbochi guzobe nke mmasị melanin, si otú inhibiting spore germination na adhesion sporulation, igbochi pathogen mbuso agha na mbenata mmepụta nke osikapa gbawara ero spores. Nhazi ọkwa Fungicide Aha ndị ọzọ tricyclazole EINECS No 255-559-5 State Powder CAS No 41814-78-2 MF C9H7N3S ...
Amitraz 12.5% ​​EC, Carbofuran 97% TC, Cyproconazole 40% WDG, Captan 95% TC, Bifteenrin 25g / l EC, Azoxystrobin 20% WDG,